Nyowani nyowani Premiere Pro, Mushure meMhedzisiro, Kuongorora uye Hunhu Nyowani | Ndinobva mac
Kana pangosara mazuva mashoma ekupemberera kweimwe yeakakosha fairs mune yekuteerera nyika, iyo NAB muna 2018, vakomana veAdobe vaita yavo diki kuti chiitiko chive chakakosha kwazvo. Tiri kutaura pamusoro pekuvandudzwa kune iyo hombe Adobe vhidhiyo yekugadzirisa kunyorera. Naizvozvo, Kutanga nhasi, isu tine Cloud Cloud inogadziridza, inosanganisira: Premiere Pro, Mushure meMhedzisiro, Kuongorora, uye Hunhu hweMhuka.
Tichaona mune aya maturusi matsva anotarisana nekufukidza vhidhiyo nhau dze2018, hombe seti yezvishandiso uye kugadzirisa, izvo zvichatibvumidza isu kuvandudza kufamba kwedu kwebasa.
Mukuburitswa kwenhau, Steven Warner, mutevedzeri wemutungamiri wedhijitari vhidhiyo uye odhiyo kuAdobe, inoratidza:
Iko kudiwa uye kumhanya kwevhidhiyo zvemukati zvisikwa zviri kusvika pamatanho asina kumboonekwa kare. Kumanikidzwa kwenguva kune nyanzvi dzevhidhiyo kunoreva kudiwa kwemasimba uye anoshanda ekugadzira maturusi asati amboonekwa ... Adobe vhidhiyo kunyorera sePremiere Pro uye Mushure meMhedzisiro dzinovapa iro iro simba iro, pamwe chete nemasevhisi anowanikwa muCreative Cloud, inopa kune nhepfenyuro, midhiya makambani, vagadziri vemafirimu uye YouTubers, yakakwana ecosystem kuendesa nyaya dzako kuchiratidziro nekukurumidza kupfuura nakare kose.
Pakati pezvinhu zvitsva zvakaunzwa kwatiri muvhidhiyo yekugadzirisa application yeAdobe Premiere Pro CC, tinowana iro basa nyowani Ruvara mechi. Iyi nzira yakafanana neiyo yakaunzwa zhizha rapfuura kune-mumba imba yekugadzirisa application, Photoshop. Inoshandisa iyo-mumba yekuchenjera injini, inozivikanwa seAdobe Sensei. Pakarepo, inokwanisa kutora dhata remifananidzo, senge mwenje uye ruvara, kuisa iwo mamwe marongero kune iwo aripo pfuti. Unyanzvi uhu pachahwo hunogona kuenzanisa zvimwe zvinhu zvechiitiko, senge rese ganda revanhu. Colour Match inotorawo hunhu hwehukama uye kuigadzirisa kuti ipe chakanyanya kuitika chokwadi.
Chimwe chinhu chinoshamisa ndeche Zvakakosha Graphics, kwanisa gonesa mameseji ane graphical zvinowedzera. Chekupedzisira, kupinza uye kutumira kunze pakati pekushandisa izvozvi kuri kukurumidza uye kuri nyore.
Iko kupihwa kweAdobe mafomu kwakasiyana, tinokurudzira kuti utarise kune link kuona kana chero sarudzo inogona kukufadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Nyowani nyowani dzePremiere Pro, Mushure meMhedzisiro, Kuongorora uye Hunhu Nyowani
Apple Bhadhara nyika muBrazil